Dalladda Ururrada Naafada Somaliland oo ugu Baaqday Dadka Laxaadkoodu kala Dhiman yahay inay si Buuxda Isku Diiwaangeliyaan |
Dalladda Ururrada Naafada Somaliland oo ugu Baaqday Dadka Laxaadkoodu kala Dhiman yahay inay si Buuxda Isku Diiwaangeliyaan
Hargeysa (GNN )- Dallada Ururrada Naafada Somaliland ku bahoobeen ee magacooda loo soo gaabiyo SNDF, ayaa guud ahaan dadka naafada ah ee ku dhaqan dalka ugu baaqay inay si buuxda uga qaybqaataan diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka soo socda.
Shir jaraa’id oo xubnaha hoggaanka dalladda SNDF ku qabteen xafiiskooda maanta, waxay ku booriyeen dhammaan dadka naafada ahi inay qaataan kaadhka codbixiyayaasha Somaliland oo diiwaangelintii la filayo in dhawaan laga bilaabo dalka, kadibna lagu gali doono doorashooyinka soo socda, iyagoo tilmaamay in qaadashada kaadhadhkaasi tahay waajib Qaran iyo xuquuq dastuuri ah oo naafadu kala siman yihiin muwaadiniinta kale ee waddanka.
Guddoomiyaha Dallada heer Qaran ee Ururrada Naafada Somaliland (SNDF) Marwo Nuura Maxamuud Nuur oo shirka jaraa’id ka hadashay, ayaa shaacisay baaqooda ka qaybgalka diiwaangelinta, waxaanay tidhi, “Dallada Naafada Somaliland ee heer qaran waxay ugu baaqaysaa dhammaan dadka naafada ah ee buuxiyey shuruudaha cod-bixinta ee lagu qeexay xeerka doorashooyinka qoddobkiisa 5-aad inay qaataan kaadhka codbixinta ee lagu codaynayo doorashooyinka madaxweynaha, ku-xigeenkiisa iyo Golaha sharci-dejinta Somaliland sannadka 2017-ka. Waxa kale oo aannu ogaysiinaysaa in dadka naafada ahi xaq u leeyihiin oo wax doortaan, lana dooran karo.”
“Dalladu waxay ku baraarujinaysaa dhammaanba dadka naafada Somaliland in ka-qaybgalkoodu muhiim u yahay qabsoomidda doorasho dimuqraadi ah oo Somaliland ka dhacda, taas oo kobcinaysa dimuqraaddiyadda iyo horumarka dalka, waxaannuna uga digaynaa Dadkaas naafada ah inay isku dayaan inay kaadhka codbixinta qaataan hal mar wax ka badan, taas oo keeni karta ciqaab sharci iyo mid maaliyadeedba sida xeer cod-bixiyayaasha Somaliland sheegayo,” ayey tidhi Guddoomiye Nuura.
Sidoo kale, Maxamed Aadan Ducaale oo ka mid ah xubnaha Dallada Naafadu ku bahoobeen, ayaa faahfaahiyey baaqooda ay u dirayaan dadka naafada ah iyo weliba muhiimada uu leeyahay.
Mr. Maxamed oo halkaasi ka akhriyey qodobada baaqooda ee war-murtiyeed dalladdu soo saartay, waxa uu yidhi, “Dhammaan dadka naafada ah ee buuxiyay shuruudaha codbixinta ee lagu qeexay xeerka doorashooyinka qodabkiisa 5aad waxaannu ugu baaqaynaa inay:
1. Qaataan kaadhka codbixinta ee lagu codaynayo doorasha Madaxwaynaha, ku-xigeenkiisa iyo Golaha Sharci-dejinta (Baarlamaanka) Jamhuuriyadda Somaliland ee qorshaysan inay dalka ka qabsoonto.
2. Dalladda SNDF waxay ogaysiinaysaa dadka naafada ah inay xaq u leeyihiin inay codeeyaan, wax doortaan, lana dooran karo.
3. Waxay la socodsiinaysaa in la’aanta kaadhka muwaadinku aanay ka horistaagayn inay qaataan kaadhka codbixinta.
4. Waxay ku buraarujinaysaa dadka naafada ah in ka qaybagalkooda doorashooyinka Somaliland uu muhiim u yahay qabsomidda doorasho loo dhanyahay oo kobcinaysa horumarka iyo dimoqraadiyadda Somaliland.
5. Waxay uga digaysaa dadka naafada ah inay isku dayaan qaadashada kaadhka codaynta hal mar wax ka badan, taas oo muwaadin kasta oo isku dayaa uu ku mutaysanayo ciqaab sharci oo isugu jirta xadhig iyo ganaax lacageed, laguna waayo karo xuquuqda codbixineed ilaa iyo inta diiwaangalin kale dalka ka dhacayso. Sida ku cad qodobka 44aad ee xeerka codbixinta farqadiisa 1aad iyo 2aad.”